Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi smile at the end of a joint press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Chinese Foreign Minister Wang Yi speaks during a joint press conference with Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat speaks during a joint press conference with Chinese Foreign Minister Wang Yi at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Chinese Foreign Minister Wang Yi, right, speaks with Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat after a joint press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat, left, listens as Chinese Foreign Minister Wang Yi speaks during a joint press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Chairman of the African Union Commission Moussa Faki Mahamat, left, and Chinese Foreign Minister Wang Yi shake hands at the end of a joint press conference at the Ministry of Foreign Affairs in Beijing, Thursday, Feb. 8, 2018. Chinese and African officials have lashed out at a recent report alleging Chinese workers bugged the African Union headquarters and suggested it was a ploy to destabilize relations. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
African Union Commission Chairperson Moussa Faki Mahamat, left, speaks during a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing Thursday, Feb. 8, 2018. (Greg Baker/Pool Photo via AP)
African Union Commission Chairperson Moussa Faki Mahamat, center, speaks during a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing Thursday, Feb. 8, 2018. (Greg Baker/Pool Photo via AP)
African Union Commission Chairperson Moussa Faki Mahamat, left, poses with Chinese Foreign Minister Wang Yi before a meeting in Beijing Thursday, Feb. 8, 2018. (Greg Baker /Pool Photo via AP)
BEIJING (AP) — Chinese and African officials on Thursday denounced a report alleging Chinese construction workers bugged the African Union headquarters, suggesting it was a ploy to destabilize relations.